Oromo News 03.19.2021 | KWIT
Galii tax dhania kan state revenue qopheesudhaf panel naanicha bor kan walgahu ta’a. tilmaamin gurguddaan hoggana house republican galii gibiraa state hir’suu irrati gara fulduraa deemuf senate Iowa karoora akka fudhatan godhamuun nimala jedhan. Garuu haarawa ganama gaazexanyoota waliin haasawa akka godhanitti karoora kana akka fudhatu nigodhama jedhanii jiran, dubattaan mana Pat Grassley akka jedhetti seera 2018 haala gibira itto guuran osoo keessa hin seenin dura warri tax guuran parsantii 4% dabaluu qaba kan jedhu mulasanii jiru.
Economy bakkeewan baadiyati lafa 10 irrtati akka gaabasa akka yaalin isaa godhamaa jirus himna. akkaata gabaasa ji’aati bakers har’a gad dhiise jira. Hanga qorannaa kun jalqabe bara 2006 kesa jalqabe. Qorannoo laffeen baadiya oddeefannoo waliigaha kan barbaachisu March February irraa 53.8 dha. Qabxii kamuu %50 ol kan tae economy akka guddataa jiru kan mullisuudha, wanni kamuu 50 gad yoo taemmoo Economy kufuu kan mullisuudha.
Sioux city robust housing market wagga tartee gabayaan mana jireenya parsantii 8.5% daballaee akka jiru warren magaala mana hordafan himanii jiran, akkaata gaabasa osuu irrraa dhufetti aka ibsaniiti Sioux City keessati maneen dabaluun haala xiqqaa tae kafaltii dhallaa fi maneen hir’atee baaye kan dabaluu waan taeefi. Waaga Kanaan bara 2020 irra olgudisanii jiran.